नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : फेरी माओवादी मुडभेडको तयारी, यस्तो पनि हुन्छ नियम कानुन को पालना नभएपछी !
फेरी माओवादी मुडभेडको तयारी, यस्तो पनि हुन्छ नियम कानुन को पालना नभएपछी !
नेकपा-माओवादीले ग्यासँ र औषधि बोक्ने बाहेकका भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरे नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएको छ । माओवादी सचिव देब गुरुङले सांकेतिक रुपमा आफूहरुले थालेको राष्ट्रियता जागरण अभियानमा सरकारले दमन गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो-’सरकारले रेस्पोन्स गरेको छैन । पेलेर नै अगाडी बढ्ने सोचेको हो भने यो विवाद टुङ्गदिैन, अझै बढेर जान्छ । हामी कुनै पनि हालतमा छाड्ने पक्षमा छैनौं ।’ उहाँले नेपाल र भारतको १० किलोमिटर वर पर गर्न पाउने सम्झौता अनुसार सिमा वारिपारि गर्ने भारतीय सवारी साधनलाई भने नरोक्ने प्रष्ट पार्नुभयो । हालै मात्र सरकारलाई ७० बुँदे माग बुझाएको नेकपा-माओवादीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई असोज ११ गतेदेखि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ । सरकार र दलहरुले भने माओवादीको आन्दोलनको विरोध गरेका छन् ।